Hadalkiii Jangali-III*: hadal baa iga raacay!.
BBC-da laanta afsoomaaliga, waraysi uu Jangali-III (3aad) siiyay haddaanan dhagaysan waxaan dhaar ku mari lahaa; INA BUUSH ruux ka indho-adag in uusan dunida ku noolayn. Illayn, maalinkii waagiisu kuu baryaba, war ama dhacdo cusub ayaad ku waabariisataa. Naanaysta ah; Jangali, labada ruux oo aan u maqlay waa; “Cabdulqaadir Adan Aw Maxamuud” Guddoomiyihii Hore oo (Bankigii Horumarinta Soomaaliyeed) haddana ku nool USA, Naaneystaa; meesha, xilliga iyo dhacdada ay ugu baxday xog badan ayaan ka hayaa. Ninka kale waa; Axmed Jaamac “Jangali”, (Wasiirkii Hore ee Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya) oo markii iigu dambaysay aan ku kulanay; xeradii “JOMO KENYATA SHOW GROUND” ee Mombasa, Kenya. Aabihi Jaamac Jangali–I oo da’ah ayaa la socday. Runtii, subaxaan arkay halka uu ka soo toosay aad ayaan u murugooday. Ma aha in aan ka murugooday diihaal ka muuqday, balse, waxaan ka carooday; “oday soomaaliyeed oo soo halgamay soona taliyay oo xero askar Kiinyaan ah ay dusha ka ilaalsato ku xeraysan, isaqa oo aqoonsi qaxootinimo ka quuddarraynaya hay’adda UNCHR. Intaa waxaa dheer odayaasha qoyska aan ka dhashay (REER AW MAXAMUUD) iyo “Axmed Jaamac Jangali” in ay saaxiibtinimo fog dhextiil.
Ruuxa saddexaad oo aan naaneystaa u maqlo waa ninkii waraysi aan ka dhagaystay BBC-da bixiyay isaga oo naaneystii awowgi huwan. Korriimo iyo waxbarasho mid ay noqotaba waxaa laga maalgaliyay hantidii ummadda soomaaliyeed, safaarado dhawr ah oo waayo aragnimo –hadda khasaaro ah- dibloomaasiyadda la xiriirta uu ka kasbay, waa ka soo shaqeeyay. Jangali-III inkasta oo aanan aqoon badan oo hore aanan u lahayn, waxaa araggiisa iigu dambaysay 27/08/2006 oo aan ku kulnay “Wilson Airport”- Nairobi, isaga oo Baydhabo ka yimid iyo aniga oo fasaxii xagaaga Kismaayo ku soo qaatay. Waqtigaa waxaa “Wilson Airport” hadba xafiis galayay nin xabashi ah oo “Basaboor Diploomaatig” ah wata oo, isna Baydhabo ka yimid. Runtii, Jangali-III iyo xabashigu in ay wada socdaan isma waydiin, kamana fakarin.
Sare waxaan ku xusay Jangali-III, in uu BBC-da hadal siiyay, arrintaa waxay dhacday malinkii bishu ahayd 21/04/2008. Hadal colooshu ila hurtay, oo fajicisso igu noqday, isaga oo aan wax lur ah iyo murugo toona aan qabin uu kala dhigdhigay waxaan ka soo qaatay, intan: (Masaajid ay ciidamada Itoobiya galeen oo dad lagu laayey ama xitaa lagu dhaawacay ma jiraan, wararkaas waa kuwa been abuur ah oo aan sal iyo raad toona laheyn oo saxaafadu ay buunbuunisay)…(Gacana waa isku difaaceynaa gacanna dib-u-heshiisiin ayaan ku baadi goobeynaa, waxay dowladdu diyaar u tahay iney la hadasho cid kasta oo nabad dooneysa)…(In masaajid dad lagu dhex laayo wa arin ka baxsan SHAREECADA ISLAAMKA oo aan ka suuroobin ciidamada Itoobiya oo taageeraya kuwa Dowladda Soomaaliya!)...
Haddaba, ma hadalka ku saabsan; (shareecada Islaamka), mise hadalka intiise kale?: Hadalka hore ninna waydiin mayo oo dhagahayga ayaan ku maqlay, hadalka dambase, waxaan ka akhriyay Shabakad Internetka, dhab ahaan, ma baciidsan in uu yiri. “Faarax Golollay” (AUN) ayaa laga sheegay; “hadalkaa ma oran shaabaddaydise waa lee yahay”. Waraysiga in badan oo ka mid ah caro ayaa idhaafisay, waxaanse, malayn karaa; hadduusan maanta oran barri in uu oran doono!. Wararkaas waa kuwa been abuur ah oo aan sal iyo raad toona laheyn oo saxaafadu ay buunbuunisay), dhihideedu waa fududdahay, waliba kolkay xaajadu kugu qalloocano, waase, been sheegid nacas ah oo beri hore laga tagay. Soomali warkeedu waa midka dhafoorka uga yaal. Hugunka iyo holaca xabbada Taangiga xabashida iyo daryaanka BM-ka madaxtooyada laga soo hurgufayo ma cod dhallinyarada saxaafaddu farsamaysay,baa?. Maydka meel walba daadsan ma filim la jilayo qayb ka mid ah,baa?. Been markaad sheegayso qiil ayaa loo sameeyaa, sida Nuur-cadde, oo waxaa lagu adkaystaa; “cadow ayaan iska dhicinnay”. Malaha, Duqa (Nuur-cadde), si kale ayuu ugu fasiran yahay erayga ah; Cadow, oo kay wada dhasheen iyo kan cadowga ah wali uma kala caddaan. Dhanka kale, Duqu (Nuur-cadde) la yaab ma laha oo da’diisi oo, hore u badatay ayuu isku qoray (Jaamacdda; War on terror) oo “ina Buush” ka dhisay magaalada “Washington DC,” wuxuuna la qabsaday arday junior ah (Ardada cuusub) oo ka firfircoon; Melles, Karasaay, Maaliki, Musharaf,…………...Horti waxaa Jaamacadda laga cayriyay (Drop out) “Geeddi” oo sixun u saaqiday. Musiibadan dooni mayo in aan ku dheeraado, waxaanna halkan tacsi u marinyaa shacabka soomaaliyeed iyo ehelada dadkii iyaga oo gacmmo maran (dhiig qabow) la xasuuqay, intii Shahiidday guri roon Allaha geeyo, dhaawacana cafimaad dagdag ah Allaha u soo dajo. “Gacan Xabashida ayaan isaga dhicinaynaa Gacanna codka ayaan ku bixinaynaa”. Hadalkaa waxaa yiri; sannadkii 1964-tii, (AUN) Dr. Cabdirashiid Calii Sharmaarke” Ra’isul wasaarihii soomaliya ee xilligaa. Miyi iyo Magaalo warkaa waa maray. Dhanka kale, aan ku saxee; xilligaa ayaa xabashitada maanta aad u qiil dayayso -4 sano oo qura ayaan madaxbannaanayn- ku hawootay soomaali oo aan qaan-qaarin in ay faraha ku dhigto. “Jamhuuriyaddii Soomaalyai” berigaa waxay isu diyaarinaysay doorashadii barlamaankii 1964-tii oo, sanaadiiqdii codaynta waa la diyaariyay.
Haddaba, haddaan dabagalo (Tacqiib) hadlkii ficil darradu ka muuqatay, carada badanna abuuray; Marka hore, wax laga xumaado waxaa ah in ninka British Broadcasting Corporation u warramay uu hadal taariikhda galay oo jawaab u ahaa xabashi; in uu ka saaro xayndaabkii saxa ahaa, oo uu damco in uu meel khaldan ku magmakeeyo (kakabin), iyada oo cadowga maanta uu yahay isla cadawgii shalay. “Dr. Cabdirashiid” hadalkiisaa Miyi iyo Magaalo waa laga soo dhaweeyay halka kan Jangali-III, Miyi iyo Magaalo laga nacaladay. Adiga oo xabshi gacan ku wata in aad tiraahdo gacanta kalana soomaali ayaan heshiisiin uga dhex dooni waa meel ka dhac tilmaan u ah; quursiga kasmada iyo dareenka qofka soomaaliga ah. “Gacan Xabashi, Gacanna Heshiis”, war soomaali la hor geeyo ma aha, sida aad wax u rabtaanna waa saas. Sidaas, hadday ka duwantahay; maxaad u qoonsateen; “wada hadal gali mayno ilaa xabshi dalka laga saaro”, Maskaxda ereyadaa macnaha silloon xambaarsan, dadka aaminsan haddaad ka mid tahay, maxaa lagaala hadlaa?, heshiiska aad waddaana waa meelmarinta hawadii xabashida oo 1964-tii afka ciidda loo daray!. Sidaani ka dhab ma aha oo, kollay labada dhinac mid baad been kula socotaa, ee degdeg u bareer; xabashi, mise soomaali?, meel dhexe ma jirto!. Xabashi iyo “Shariicada Islaamka”, ayaan meel isugu geyn ninka yiri: “Godka lagu cadaab muxuu go’uhu been sheegay”. Haddii uu ninkaasi eraygaa yiri; iyo haddii uusan oran, midi muran ma leh oo, waa in uu: XABASHI U HAYO SHAQO QARAN..
Hadal lama saaraadee, ninkaa waxaan u soo jedinayaa dhawrkan sadar oo talada ah: Marka Koowaad: Geedka shir inta aadan tagin ayaa garta la sii akhristaa. Sidaa darteed, “nabad iyo heshiisiin soomaali dhexdeed ah haddii ay dhab kaa tahay (idanka tahay); marka hore, qallooca meesha ku jira saara oo waxaad ku dhiirataan in aad tiraahdaan; “xabashi ha ku noqoto maalinkii 27/01/1991 meeshii ay joogtay oo ah; gaddiga kale oo xadbeenaadakii Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexeeyay ee caalamku hore u aqoonsaday. Marka Labaad: Nabigeenni suuban (SSC) wuxuu yiri: “Ibnow, Aadan oo dhammmi waa khaldamaad, inta khaldantana waxaa ugu roon intii tawbad keenta”…Carabina, waxay tiri: (xaqa oo loo laabto waa fadiilah [waxsan kororsi], haddaba labadaa hadal qalbiga inta ku qufulatid, af-muggi waxaad ku tiraahdaa: “waan khaldamay waana ka laabtay wixii Shaydaanku iga yeersiiyay, soomaaliyeey; ha la icafiyo”, sidoo kale; ehelada dadkii xabashidu xasuuqday u tacsiyee. Markaa Saddexaad: Nolosha qurbaha –haah, oo waa wax adag- haddad xammili kari wayday, Xamar iyo Baydhabo in aad ka fogaatana aadan jeclaysan, sababo kuu gaar ah dartood; “wasaaradihii Boosta iyo Xannaanada Xoolaha” isaga laabo, waa kuu dhaamaan Wasaarad Arrimo Dibadeed; waxa ay ku sheegeen oo, xire iyo fure midna aadan ka ahayn, eed wax aan ahayn kaa soo galayn”…Waligaa, yaan lagugu xaman hadal qallafsan (meel-ka-dhac) oo shaabad kugu noqda. “Waa la duugsane yaan la dacaroon”; yaryaraysi ma leh.
Ugu dambayn, “Sayid Maxamed Cabdulle Xasan”; markuu gumaysiga soomaalidii raacday la hadlayay, wuxuu yiri:
Aman aaladduu sida, ama awrtabuu rara
Ama ariga buu qala, ama laba ugaarsada
Ama uba ilaalaa ah, ama uurka kala jira
Ashahaado beeniyo, islaannimo ha lagu dhaqo
Ilaahayna nama oran, anna ma oggolaan karo!.
Allow, ma la taliyay!.